सुशान्त प्रकरणमा प्रेमीका रियाबारे प्रहरीले गर्यो यस्तो नयाँ खुलासा – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/सुशान्त प्रकरणमा प्रेमीका रियाबारे प्रहरीले गर्यो यस्तो नयाँ खुलासा
सुशान्त प्रकरणमा प्रेमीका रियाबारे प्रहरीले गर्यो यस्तो नयाँ खुलासा
काठमाडौं, साउन २ । बलिउड नायक सुशान्त सिंह राजपूतले आ,त्मह,त्या गरेको महिनादिनभन्दा बढी समयपछि पनि प्रहरीले आ,त्मह,त्याको कारण पत्ता लगाउन सकेको छैन । थप गहिरो अनु,सन्धानमा जुटेको प्रहरीले स्रोतका अनुसार सुशान्तको डिप्रेसनको उपचार गर्ने डाक्टरलाई पनि पुलिस स्टेशनमा सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको छ । सुशान्तका कुक निरजसँग पनि फेरि सोधपुछ हुनसक्नेटाइम्स नाउमा प्रकाशित रिपोर्टले जनाएको छ ।
त्यस्तै सुशान्तकी बहिनी मितलाई पनि प्रहरीले सोधपुछका लागि आफ्नो लिस्टमा राखेको र उनीबाट सुशान्तको निजी जीवन र रिया चक्रवर्तीसँगको सम्बन्धबारे सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरीको गोप्य स्रोतले सुशान्तकी प्रेमिकाले सुशान्तको पैसा खर्च गर्ने गरेको रहस्य समेत पत्ता लगाएको की थिइन् ।
प्रहरी यो खोजीमा लागेको छकि उनले कति पैसा खर्च गरेकी थिइन् । यसैबिच प्रेमी सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भएको एक महिना पछि उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेखेकी छिन् । ।सुशान्तको निधन भएको एक महिनासम्म पीडमा मै रहेकी उनले अन्नत एक महिना पछि साजिक संजाल मार्फत उनलाई सम्झेर स्टास लेखेकी हुन् ।
उनले सुशान्तलाई सम्झिदै सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा स्टाटस लेखेकी छिन् ‘अहिलेसम्म मैले तिमीलाई गुमाउनु पर्ने पीडा लिइरहेको छु, आफैसँग झगडा गरिरहन्छु। तिमी यस्ता व्यक्ति थियौं जसले मलाई विश्वास गर्यौ र प्रेममा कति शक्ति हुन्छ भन्ने बुझायौ। तिमीले मलाई गणितको सानो सुत्रले पनि कसरी जीवनलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ भन्ने सिकायौं । म तिमिलाई वचन दिन्छु कि म तिम्रो जिवनबाट सकरात्मक पाठहरु सिक्नेछु ‘ ।
सुसान्तले एक महिना अघिमुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरको फेनमा पासो लगाएर ज्यान फालेका थिए । उनको नि,धनपछि पनि बलिउडले उनलाई बिर्सन सकेको छैन् । उनको मृ,त्युको पीडा सहन नसकेर उनका पाँच जना फ्यानले ज्यान लिइसकेका छन् ।
आज ६८ दिन पछि पल शाहले दिए खुशीको खबर, पल शाह छुटे ? म्यानेजर जोशी फन्दामा
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए आज ५ संक्रमित
दुर्गेश भन्छन् : मेरो फिल्म काटेर फिल्म चल्छ भने चलोस्
काठमाडौं उपत्यकामा आजबाट के खोल्न पाइन्छ के पाइदैन ? हेर्नुहोस्
खुसीको खबर ! सियोनाले विश्वको सब भन्दा महँगो जी’न थे’रापी लटरी जित्न सफल , निःशुल्क उपचार गरिने